Fenoarivobe – Bongolava: nanaovana ezaka ny fizarana bokin-tany | NewsMada
Fenoarivobe – Bongolava: nanaovana ezaka ny fizarana bokin-tany
Anisan’ny mampitaraina ny Malagasy maro ny raharaha momba ny tany, noho ny fitadiavana izao karazana antontan-taratasy rehetra izao ; ny boky efa rovitra any amin’ny sampandraharahan’ny fananan-tany fa indrindra, ny fomba fiasa any amin’ny sampandraharaha sasany anjakan’ny kolikoly. Misy an-taona maro vao vita ny taratasy hahazoana bokin-tany (titre), raha hahazo.
Manoloana izany, manao ezaka ny ao amin’ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany, manamora ny hahazoana bokin-tany. Natao izany ary nozaraina ny herinandro lasa teo any amin’ny distrikan’i Fenoarivobe, faritra Bongolava; notolorana izany koa ny ao amin’ny fiompiana omby, Ambatolampy, distrikan’i Tsiroanomandidy. Nisaotra ny fanjakana ny mponina any an-toerana noho ny fahazoana izany bokin-tany izany nahafa-pahasahiranana azy ireo. “Efa nentanina ny olona hanao ny azy nanomboka ny taona 2008, saingy nandamoka izany, betsaka ny very vola”, hoy ny mponina any Fenoarivobe.
Tanjona napetraky ny minisitera amin’izao fizarana bokin-tany izao ny fampihavanana ny Malagasy amin’ny taniny. Iaraha-mahalala ny fahamaroan’ny ady tany eny amin’ny fitsarana ary matetika, resy ny manana ny marina, ny tompon-tany. Nambaran’ny minisitera fa mampisokatra ny lalana amin’ny findramam-bola koa izao, ary mbola hotohizana ny asa any amin’ny kaominina sy ny faritra maro.